Kenya inowedzera nguva yekudzoka kumba, inorambidza kuungana kwevanhu vese seECOVID spikes
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kenya Kupwanya Nhau » Kenya inowedzera nguva yekudzoka kumba, inorambidza kuungana kwevanhu vese seECOVID spikes
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Gurukota rezvehutano reKenya, Mutahi Kagwe
Huwandu hwehutachiona hwave kukwira zuva nezuva sezvo vezvematongerwo enyika, gore rimwe chete kubva pasarudzo, vachiita misangano mikuru pasirese.
Nhamba yemakesi matsva eCOVID-19 makesi muKenya.
Kenya inowedzera nyika nguva yehusiku.
Zvipatara zveKenya zviri kukurirwa nezviitiko zvitsva zvemakona.
Kenya Gurukota rehutano VaMutahi Kagwe vazivisa nhasi kuti nyika yekuEast Africa iri kuwedzera nguva yekumira panguva yehusiku uye kurambidza kuungana kwevanhu uye misangano yemunhu-wega kuyedza kumisa kupararira kuri kuwedzera kwe COVID-19.
Kenya, mumazuva achangopfuura, yakaona spike mumakesi matsva eCOVID-19 kubva kuDelta musiyano, iine huwandu hwehuwandu hwe14 muzana kubva Chishanu zvichienzaniswa neanomwe muzana mwedzi wapfuura.
“Kuungana kwevanhu vese nemisangano inogara vanhu-yega yechinhu chipi zvacho chakamiswa munyika yose. Panyaya iyi, hurumende dzese, kusanganisira misangano yehurumende pamwe nemisangano, zvinofanirwa kushandurwa kuti zviitwe kana kumbomiswa mumazuva makumi matatu ari kuuya, ”akadaro Kagwe mumusangano weTerevhizheni nemusi weChishanu, achiyambira kuti zvipatara zvemunyika zviri kuwanda.
Vati huwandu hwehukama hwaive panjodzi yekukwira kunze kwekunge matanho akakomba atorwa.
"Tinoenderera mberi kukumbira vese maKenya, kusanganisira avo vakagamuchira majekiseni avo eECVID-19, kuti vasarega kurinda," akadaro Kagwe mushure memusangano weNational Emergency Response Committee yeCoronavirus.
Kenya anga ari pasi peimwe nzira yekutora nguva kubva munaKurume gore rakapera apo denda rakatanga kurova, uye Kagwe akati ichawedzerwa nyika kubva 10pm kusvika 4am nguva yemuno kusvika chimwe chiziviso.
Kufanana nevakawanda vavakidzani vayo, Kenya yakatora danho nekukurumidza kurwisa COVID-19 pakutanga kwedenda, ichitadzisa kufamba nekuvhara miganhu nezvikoro.
Asi huwandu hwehutachiona hwave kukwira zuva nezuva sezvo vezvematongerwo enyika, gore rimwe chete kubva pasarudzo, vachiita misangano mikuru munyika yose.
Kuburitswa kwemajekiseni kwave kunonoka muKenya, pamwe nekuda kwekushaikwa kwekuwanikwa.
Kenya yakabaya nhomba vanhu vanosvika miriyoni imwe nemazana manomwe nemanomwe, mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemanomwe nemakumi matatu nematatu, kana kuti zvikamu mazana maviri nezvisere nezviviri zvevanhu vakuru, vakabayiwa nhomba zvizere.
Pakazara, Kenya yakanyoresa zvinodarika mazana maviri ezviuru zvezviitiko zveCOVID-200,000 uye kufa kwe19.
kunyevera kuti zvipatara zvave kuwandisa.